သင်၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ထိခိုက်စေမည့်အရာ ၁၀ ခု | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 19, 2010 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
မနေ့ကငါဒေသဆိုင်ရာနှင့်အတူအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့ပျော်မွေ့ခဲ့သည် အမျိုးသား Speaker Associationကဦးဆောင် ကားလ် Ahlrichs။ အများပြည်သူဟောပြောသူများအတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိရန်အရေးကြီးသည်။ တက်ရောက်လာသူအများစုသည်သူတို့၏ဗျူဟာတွင်ကြီးမားသောကွာဟချက်အချို့ကိုတွေ့ရ။ အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီ ... အများစုအေဂျင်စီများတက်ကိုမစောင့်သောကြောင့်ဤအမှုအများစုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာ website တစ်ခုဖွင့်ထားလျှင်, ဘယ်နေရာမှာအလယ်၌တစ်ဦးစတိုးဆိုင်ဖွင့်နဲ့တူရဲ့။ ဒါဟာအဆင်းလှဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူကသင်သည်မည်သည့်ဖောက်သည်ရဖို့မသွားရဲ့။ သင်၏ site ကိုတည်ဆောက်စဉ်တွင်သင်၏အေဂျင်စီတွင်ထည့်သွင်းရမည့်အချက် ၁၀ ချက်ရှိသည်။
Content Management System - အေဂျင်စီများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားဓားစာခံများကိုဓားစာခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားခြင်းသည်အလွန်များပြားလှသည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များရှိသည့်အခါမွမ်းမံမှုများနှင့်တည်းဖြတ်မှုများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုသင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်သည်သင်၏ site ကိုမှတည်းဖြတ်ထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သင်၏အေဂျင်စီသည်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုခိုင်မာသည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏မည်သည့်အင်ဂျင်မဆိုနီးပါးတွင်အသုံးချသင့်သည်။
Search Engine Optimization - အကယ်၍ သင်၏အေဂျင်စီသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု၏အခြေခံကိုနားမလည်ပါကသင်သည်အေဂျင်စီအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အုတ်မြစ်မရှိသော site တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တူ၏။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ဖုန်းစာအုပ်အသစ်ဖြစ်သည်။ သင်၌မရှိပါကမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှသင့်အားမတွေ့ပါနှင့်။ သူတို့ကသင့်ကိုပစ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးအချို့ကိုဖော်ထုတ်ရာမှာသင့်ကိုကူညီနိုင်အောင်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။
analytics - သင်၏အခြေခံနားလည်မှုရှိသင့်သည် analytics နောက်လာမည့် over ည့်သည်များမည်သည့်စာမျက်နှာများနှင့်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုမည်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုနေသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ site ကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်စေနိုင်သည်။
Blogging နှင့်ဗီဒီယို - ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားသတင်းများဆက်သွယ်ခြင်း၊ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုသင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားဝေမျှခြင်းအပြင်၎င်းတို့အားအောက်ပါနည်းလမ်းများ၊ subscriptions များမှတဆင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏စာများကိုစာမျက်နှာတိုင်းတွင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သင့်သည်။ ဗွီဒီယိုကသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတစ်တန်တိုးစေလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကခက်ခဲတဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းပြတာကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်၊ ​​ပြီးတော့သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီနောက်ကွယ်ကလူတွေကိုကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။
Contact Form - လူတိုင်းကဖုန်းကိုခေါ်။ မခေါ်ချင်တော့ပါ။ သို့သော်သူတို့သည်သင်၏အဆက်အသွယ်ပုံစံဖြင့်မကြာခဏသင့်အားစာရေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုတောင်ပရိုဂရမ်ရေးဖို့တောင်မလိုပါဘူး။ သင့်ကိုအကောင့်တစ်ခုရနိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်းပုံစံဆောက်,မင် , သင်တက်နှင့်ပြေးပါလိမ့်မယ်!
မိုဘိုင်း Optimization - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ မိုဘိုင်း visitors ည့်သည်များအားသင်၏ site ကိုကြည့်ရှုရန်၊ သင်၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ် link တစ်ခုလုပ်ရန် link တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းဆက်.
တွစ်တာ - သင်၏အေဂျင်စီသည်သင်၏စာမျက်နှာ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီသောသင်၏ Twitter စာမျက်နှာအတွက်နောက်ခံကောင်းသည့်နောက်ခံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သင့်သည်။ သင်၏ဘလော့ဂ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုအလိုအလျောက်တွစ်တာတင်ရန် Twitterfeed ကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခုဖြင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုလည်းပေါင်းစည်းသင့်သည်။ သင်၏အေဂျင်စီသည် Twitter ကိုရိုးရှင်းသောလူမှုရေးသင်္ကေတတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ဆိုက်တွင်နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်ပေါင်းစပ်သင့်သည်။
Facebook က - သင်၏အေဂျင်စီသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို Facebook စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်အသုံးပြုပြီးမှတ်စုများ (သို့) Twitterfeed ဖြင့်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုပေါင်းစည်းသင့်သည်။
ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - သင့် site ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသောခေါ်ဆိုမှုများသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏အေဂျင်စီသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏စာမျက်နှာတိုင်းမှတစ်ဆင့်မည်သို့မောင်းမည်နည်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုဆွေးနွေးသင့်သည်။ သရုပ်ပြမှုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပိုမိုသောသတင်းပုံစံများ၊ စာအုပ်များ၊ ကူးယူမှုများ၊
အီးမေးလ်စျေးကွက် - သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ Vis ည့်သည်များသည် ၀ ယ်ရန်အမြဲအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ အချို့သည်သူတို့မ ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီခဏတစ်ဖြုတ်တည်းဖြစ်လိုကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာနှင့်အချိန်မီသတင်းအချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးသည့်အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်သတင်းလွှာသည်လှည့်ကွက်သာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏အေဂျင်စီကသင့်အားခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်ပါသောအီးမေးလ်ဖြင့်သင့်ကိုဆက်သွယ်သင့်သည် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးCircuPress လိုပဲ။ သင်၏ဘလော့ဂ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်အလိုအလျောက်နေ့စဉ်အီးမေးလ်များကိုသူတို့၏စနစ်ဖြင့်ပင်မောင်းနှင်နိုင်သည်၊
အချို့သောအေဂျင်စီများသည်ဤလုပ်ငန်းအားလုံးကိုလုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပ၌ရော၊ ပြင်ပတွင်ပါတွန်းအားပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ သူတို့ဖောက်သည်များနှင့်တိုးမြှင့်လာသည့်အချိန်နှင့်လှပသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုတွန်းပို့ခြင်းသည်မလုံလောက်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်သင်၏နည်းဗျူဟာသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကျော်လွန်ပြီးလူမှုမီဒီယာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှုအေဂျင်စီများ: သင်တို့ clients များပြင်ဆင်နေမဟုတ်နေတယ်ဆိုရင် အပြည့်အဝဝဘ်မူတည်မင်းငါ့ကိုမြည်းတစ်ဝက်အလုပ်အတွက်ပိုက်ဆံယူနေတယ်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများက ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိနေခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရရှိစေမည့်မဟာဗျူဟာတည်ဆောက်ရန်သင့်အားအားထားနေရသည်။
Tags: အေဂျင်စီများကိုယ်စားလှယ်ရုံးanalyticsဘလော့ဂ်contact formအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အီးမေးလ်စျေးကွက်Facebook ကဆင်းသက်စာမျက်နှာများမိုဘိုင်း optimizationရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationတွစ်တာဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးVlogging
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် PR အသစ်ဖြစ်သည်
စက်တင်ဘာ 20, 2010 မှာ 8: 00 AM
စက်တင်ဘာ 20, 2010 မှာ 8: 06 AM
မိုက်ကယ်သဘောတူပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အေဂျင်စီနှစ်ခုလုံးသည်၎င်းတို့နယ်ပယ်တွင်သာအလုပ်လုပ်ပြီးစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုနားမလည်ကြသောကြောင့်အွန်လိုင်းခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများနှင့်မလိုက်ဖက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကအပြစ်တင်စရာရှိသည်။ အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မဟာဗျူဟာကြီး၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသဘောမပေါက်သောကြောင့်သူတို့ ၀ ယ်နိုင်သည့်စျေးအသက်သာဆုံးဆိုဒ်ကိုဈေးဝယ်ထွက်ကြသည်။
စက်တင်ဘာ 21, 2010 မှာ 10: 24 AM
ဤအချက်များအားလုံးသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။ ၀ က်ဘ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည်။ သူတို့၏စီးပွားရေးပုံစံနှင့်ကိုက်ညီပါကမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှာကြသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးအဖြစ်ယူရန်လိုအပ်သည်၊ များစွာသောသူတို့သည်ဤလမ်းကြောင်းကိုမသွားရန်ရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့အမြင်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ image အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ငါကြိုးစားပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ developer ကို ၁၅ မိနစ်လောက်ပေးလို့ရတာပါပဲ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှကြာသည်ကိုကျွန်ုပ်မေးသောအခါသူကမသေချာသော်လည်းနာရီပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကြာသည်။ WordPress နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသင်တန်းများဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်သူတစ် ဦး အဖြစ်ဒေါ်လာ (၉၀) ခန့်ရှိသောသူသည်တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ (၉၀) နှုန်းဖြင့်တကယ့်ငွေကိုတိုးပွားစေသည်။
ဒါကြောင့်ဒီရှုထောင့်အားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ရှိပေမယ့်ဒီနေ့ငါပြောခဲ့တာတွေအပါအ ၀ င်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်တွေကဘလော့ဂ်လုပ်တာစတာတွေကိုအခြားအလုပ်တစ်ခုလိုသဘောထားကြတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်အချိန်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့တီထွင်သူကိုအလုပ်လုပ်ပြီးသူတို့လုပ်ရမယ့်စာရင်းကိုရှင်းပစ်မယ်ဆိုရင်ငါဓားစာခံအဖြစ်မခေါ်ပါဘူး - ငါအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အသိဉာဏ်ရှိသောအသုံးပြုမှုလို့ခေါ်တယ်။
21:2010 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 59 မှာ
လုံးဝ Preston, သဘောတူသည်။ ကျနော့်ပြissueနာကအေဂျင်စီတွေကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဘလော့ဂ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုတောင်မဆွေးနွေးနိုင်ဘူး၊ ဒါကအလားအလာရှိတဲ့မဟာဗျူဟာလား၊ အဲဒါကံဆိုးတာပဲ
စက်တင်ဘာ 22, 2010 မှာ 7: 18 AM
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအချက်တွေထဲကတစ်ခုချင်းစီကိုဆွေးနွေးပြီးပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားချန်လှပ်ထားခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားတဲ့အမှားပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များအား SMM လမ်းပေါ်ဆင်းသွားရန်တောင်းပန်လိုသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကောင်အထည်မဖော်သူတစ် ဦး က၎င်းတို့အားရလဒ်ကိုပြသမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောစီးပွားရေးအများစုသည်မထိချင်ကြပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ အဲဒီနောက်သူတို့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။
ငါဒီစီးပွားရေးမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရှာမယ်ထင်တယ်၊ ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတော့ပထမမျိုးဆက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရှိတယ်၊ ဆင်းသက်လာတဲ့စာမျက်နှာများ၊ အရေးယူရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဘလော့ဂ်တခုရှိသေးတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက“ ငါကအင်တာနက်ပေါ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမရဘူး။ ” ကောင်းပြီ, အရမ်းရယ်ရတယ်, အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ😉